I-Polyester Roller Blinds Fabric Manufacturers & Suppliers - I-China Polyester Roller Blinds Fabric Factory
I-10 Year Warranty Roller Blind Fabric Blackout Silver Cover
Indwangu eyimpumputhe ye-polyester yesitayela esisha eyenziwe nge-polyester ehlala isikhathi eside, engelashwa ukuvimbela amagciwane nokunciphisa ukuguga. Lokhu kwendwangu eyimpumputhe ye-blackout roller iyisitayela kakhulu futhi inganikeza umoya omuhle. Ingavimba imisebe ye-ultraviolet yelanga futhi ivimbe umsindo. Intengo inengqondo futhi isetshenziswa kabanzi.
Inezinhlobo ezihlukahlukene, enezici nezimo ezihlukene zethue. Yenziwe nge-polyester engu-100% futhi inikeza umphumela we-shading we-100%, ofaneleka kakhulu kulabo abadinga ubumfihlo. Iphethini izoletha umuzwa wemfashini endlini yakho, futhi umphumela wobuhle muhle kakhulu.
100% Isembozo se-Polyester Roller Blind Fabric Blackout Foam
Indwangu eyimpumputhe yesitayela esisha se-polyester blackout roller yenziwe ngezinto ezihlala isikhathi eside ze-polyester, ezingelashwa ukuvimbela amagciwane nokunciphisa ukuguquguquka. Kulula kakhulu ukuzihlanza futhi zihlala isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, i-Groupeve ingakusiza ukuthi ukhethe izindwangu ezifanele zezindawo ezinomswakama ophezulu njengezindlu zangasese noma izindawo ezishisayo. Ukuze wenze ukubukeka kubonakale kuphelele, sicela usebenzise izesekeli zethu ezifanayo (okuhlanganisa namalayili angezansi, abakaki namaketango) kanye nemisebenzi yokuthuthukisa amakhasethi eya ngokuya ithandwa, engafihla i-reel kanye ne-bracket components, ngaleyo ndlela ithuthukise ukusebenza kwe-New style polyester blackout roller blind .
Iwaranti yeminyaka eyi-10 ye-Roller Blind Fabric Semi-blackout 100% Polyester
Indwangu eyimpumputhe ye-SuneTex roller yenziwe nge-polyester engu-100% ngekhwalithi enhle. Umkhiqizo oqediwe ungenye yebhizinisi lethu eliyinhloko. Sinemibala ehlukahlukene nobubanzi obuhlukene ozikhethele yona. Into ngayinye inokubukeka okuhle kanye nekhwalithi enhle. Indwangu yethu ayinawo uwoyela futhi ayinamanzi, kulula ukuyihlanza, yome uma isihlikihliwe. Futhi inekhono elihle ku-shading futhi inomphumela omuhle wokungenisa umoya.Ifanele ukusetshenziswa kwekhaya nehhovisi.
Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-17 ngezindwangu ezingaboni kanye nemikhiqizo edayiswa emazweni angaphezu kuka-200. Singabakhi, sithengisa izimpahla kubathengi bethu ngqo, ingakusiza ngokweqa izindleko eziphakathi. Inhloso yethu ukwenza impilo yakho ibe ngcono. Ngekhwalithi enhle neqembu lesevisi elingcono kakhulu, sithandwa kakhulu phakathi kwamakhasimende ethu.
2021 Isitayela Esisha Esiphindwe Kabili Side Pearlic Roller Fabric Semi-blackout
Ukukhanyisa okulawulwayo. Vula ukubuka. Izitayela zesimanje. Idizayini eshelelayo. Ukuthungwa kwemfashini, imibala nezindwangu. Igqugquzelwe izitayela zomhlaba wonke zendwangu, idizayini, imfashini nezindwangu, iqoqo le-Groupeve elinwetshiwe liziqhayisa ngendwangu enhle ehlukahlukene engaphezu kuka-100. Iqoqo lihlanganisa ukuthungwa kwendwangu yekotini kanye nelineni ebukeka kahle eyenza umoya olinganiselayo futhi ozolile olungele ukuphathwa kokukhanya nokulawula ukushisa. Izindwangu Zokuhlunga Okukhanyayo zivumela ukukhanya okukhulu ngaphakathi. Ingavimba imisebe ye-UV futhi yehlise izindleko zamandla kuyilapho ugcina ukubuka kwakho.
Indwangu ye-Pearlic Roller Eqinisekisiwe Semi-blackout 100% Polyester
Indwangu yama-roller blinds iwumklamo olula kodwa osesitayeleni wokumboza amafasitela akho. Banikeza ukuncishiswa kwe-glare okuhle kakhulu nokuvikela kwe-UV ngenkathi behlinzeka ikhaya lakho ngokubukeka okuhle nokunesitayela. Uhlu lwethu olubanzi lwezindwangu lukunikeza ukhetho lokuhlunga ukukhanya ngama-sheers nezinye izindwangu zezinto ezikhanyayo zokufiphaza kwegumbi. Ama-Double roller blinds nawo asetshenziswa kabanzi ezindlini nasemahhovisi. Kokubili izindwangu ezimnyama nezicwebile zingasetshenziswa kusistimu eyimpumputhe yerola eyodwa ukuze ulawule ukukhanya okuhle kanye nomthelela owenziwe ngezingqimba omangalisayo. Ama-roller blinds angasetshenziswa ngesandla noma nge-elektroniki.
Izimpumputhe Umkhiqizi Roller Izimpumputhe Semi Blackout Fa
I-Sunetex Semi Blackout Roller Blind Fabric yenziwe nge-polyester engu-100% enekhwalithi ephezulu nezinhlamvu ezinhle. Ngendlela yokuhlanganisa yeglue yobuso obubili okwenza kube nomthelela omuhle ekugcineni ukukhanya kungabonakali kanye nokuvikela ubumfihlo bomuntu siqu. Ikhwalithi enhle ye-polyester ingayenza iqine, ingabi nasikhunta, ingabi nanundu, ingabi nokuguqulwa, ayikho ithrekhi ngemva kokusetshenziswa isikhathi eside.
I-Sunetex Roller Blind Blackout Fabric idume kakhulu phakathi kwamakhasimende ethu, inenani eliphezulu lokuthenga kabusha. Imikhiqizo yethu isezingeni elihle futhi intengo evumayo. Sine-MOQ ephansi yakho. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi inani lakho likhulu noma lincane, singenza ibhizinisi nawe. Ngekhwalithi enhle nesevisi engcono kakhulu, sikholelwa ukuthi singaba umphakeli oqinile wakho. Futhi ngokubambisana kwethu kokuqala, singakunikeza amasampula wamahhala ukuze uhlole ikhwalithi nombala.
I-Sunetex Jacquard Semi-Blackout Roller Blinds Fabric inokuncintisana kakhulu. Yinhle nemfashini. Ngendlela yokuhlanganisa ubuso obukabili, imikhiqizo yethu imnyama. Indwangu yethu iyashintshashintsha, engenza igumbi lakho libe lula. Ngaphandle kwalokho uyakwazi ukubona indawo ngoba imnyama kancane. Sinezinhlobo ezahlukene zezindwangu ozikhethele zona. Yonke imikhiqizo yethu isezingeni elihle futhi intengo ephusile.
Imikhiqizo yethu ijabulela izinga eliphezulu lokuthenga kabusha phakathi kwemikhiqizo yethu. Singumkhiqizi ochwepheshe ezindwangu ezimpumputhe. Sine-MOQ encane, uma i-oda lakho likhulu, sizokuhlelela ukukhiqizwa, kuzodinga izinsuku ezingaba ngu-30 ukuwakhiqiza. Uma i-oda lakho lilincane, ungakhathazeki, sinempahla evamile yezinto ezithengiswayo ezishisayo. Siyaqhudelana ku-logistic yezimpahla. Singakunikeza amasampula mahhala ukuze uhlole ikhwalithi nombala.
Indwangu ye-Motorized Window Shutters Blinds
I-Sunetex Motorized Window Shutters Blinds Fabric yenziwe nge-polyester ngekhwalithi enhle. Umkhiqizo oqediwe ungenye yebhizinisi lethu eliyinhloko. Sinemibala ehlukahlukene nobubanzi obuhlukene ozikhethele yona. Into ngayinye inokubukeka okuhle nekhwalithi enhle.Indwangu yethu ayinawo uwoyela futhi ayinamanzi, kulula ukuyihlanza, yome uma isihlikihliwe. Futhi inekhono elihle ku-shading futhi inomphumela omuhle wokungenisa umoya.Ifanele ukusetshenziswa kwekhaya nehhovisi.
I-Sunetex Motorized Window Shutters Blinds Fabric ingenye yezimpumputhe zethu eziyisimungulu. Ingakugcina indawo ethulile. Sinikeza iwaranti yeminyaka eyi-10 ngento ngayinye yethu. Futhi ngokubambisana kokuqala, singakunikeza amasampula. Sine-MOQ encane, uma i-oda lakho likhulu, sizokuhlelela ukukhiqizwa, kuzodinga izinsuku ezingaba ngu-30 ukuwakhiqiza. Uma i-oda lakho lilincane, ungakhathazeki, sinempahla evamile yezinto ezithengiswayo ezishisayo.
I-Roller Blind Curtains Indwangu Semi Blackout
Imikhiqizo yeSunetex Jacquard Roller Blinds Fabric Blackout Series yenziwe nge-polyester engu-100% enekhwalithi ephezulu. Sinikeza izindwangu ze-jacquard ngezindlela ezihlukene zokugqoka. Indlela yokuhlanganisa idiphu yobuso obuphindwe kabili ingenza izindwangu ezimnyama kancane, indlela yokugcoba emhlophe eyigwebu ingenza izindwangu ezimnyama. Imikhiqizo yethu ifanele isikole, ihhovisi kanye nekhaya.
Imikhiqizo yethu ihlose ukwenza impilo yakho ibe ngcono. Imikhiqizo yethu iyamelana nokucindezela nempilo ende yesevisi, ngokomsebenzi owenziwayo icophelela kakhulu, umphumela we-shading nawo muhle kakhulu, iphethini ibukeka kahle kakhulu, ilula futhi iyisimo sesitayela, kulula ukuyifaka. Ngenani elithengekayo, imikhiqizo yethu idumile phakathi kwamakhasimende ethu. Singanikeza amasampula mahhala!
Indwangu Eyimpumputhe Yewindi Elimnyama Elimnyama
I-Sunetex Semi Blackout Window Fabric White Coating yenziwe nge-polyester ngekhwalithi enhle. Inomphumela omuhle we-shading futhi ingavimba ngempumelelo ukukhanya okuqinile nemisebe ye-ultraviolet. Sinemibala ehlukahlukene nobubanzi obuhlukene ozikhethele yona.
Indwangu yethu ayinawo uwoyela futhi ayinamanzi, kulula ukuyihlanza, yome uma isihlikihliwe. Futhi inekhono elihle ku-shading futhi inomphumela omuhle wokungenisa umoya. Sine-MOQ encane, uma i-oda lakho likhulu, sizokuhlelela ukukhiqizwa, kuzodinga izinsuku ezingaba ngu-30 ukuwakhiqiza. Uma i-oda lakho lilincane, ungakhathazeki, sinempahla evamile yezinto ezithengiswayo ezishisayo. Singakunikeza amasampula mahhala ukuze uhlole ikhwalithi nombala.
Indwangu Eyimpumputhe Eyimpumputhe Yendwangu Ephindwe Kabili Yobuso
I-Sunetex Slubby Yarn Blind Fabric yenziwe ngezindwangu ezimnyama ezingu-100% ze-polyester ezinekhwalithi ephezulu. Singakunikeza 200/230/250/300 cm ububanzi obuhlukene ewindini lakho, futhi ubude obujwayelekile bungamamitha angu-40 umqulu ngamunye. Imikhiqizo yethu ifanele ihhovisi, isikole nasekhaya. Sinezinhlobo ezahlukene zezindwangu ozikhethele zona, ungakhetha noma iyiphi.
Singumkhiqizi ochwepheshe wezindwangu zamakhethini iminyaka engaphezu kwe-16. Ngendlela yokukhiqiza ethuthukisiwe, amandla ethu okukhiqiza anokuncintisana, isikhathi sokukhiqiza sifushane kakhulu. Ukuqinisekisa ukukunikeza izimpahla zethu eziphelele, senza ukuhlola okungu-100% kumikhiqizo yethu. Sine-MOQ ephansi, Singahlela ukulethwa ngokushesha uma kwenzeka sinesitoko. Siyi-wholesales factory, imikhiqizo yethu isezingeni elihle futhi intengo iyancintisana. Ngokubambisana kokuqala, singakunikeza amasampula amahhala.
I-Smart Home Roller Blind Fabric Superior Medium
I-Sunetex Blackout Roller Blind Fabric yenziwe nge-polyester engu-100% enekhwalithi ephezulu nezinhlamvu ezinhle. Izinto ze-polyester ezisezingeni elihle zingayenza iqine, ingabi nasikhunta, ingabi nanundu, ingabi nanguquko, ingabi nathrekhi ngemva kokusetshenziswa isikhathi eside.Ngendlela yokugqoka yeglue yombala ophindwe kabili, iyenza ibe nomthelela omuhle ekugcineni ukukhanya nokuvikela ubumfihlo bomuntu siqu kungangeni.
Imikhiqizo yethu iyamelana nokucindezela nempilo ende yesevisi, ngokomsebenzi owenziwayo icophelela kakhulu, umphumela we-shading nawo muhle kakhulu, iphethini ibukeka kahle kakhulu, ilula futhi iyisimo sesitayela, kulula ukuyifaka. Imikhiqizo yethu ihlose ukwenza impilo yakho ibe ngcono. Ngenani elithengekayo, imikhiqizo yethu idumile phakathi kwamakhasimende ethu. Singanikeza amasampula mahhala!